Maxkamad Hindiya ku taalla oo xukuntay arin lala yaabay. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxkamad Hindiya ku taalla oo xukuntay arin lala yaabay.
Waa maxay waddooyinka haweeneyda Muslimadda ah uga bannaan inay furto ninkeeda? Maxkamadda Sare ee Kerala ayaa arrintaas ka gaartay go’aan kaddib dood dheer oo su’aashan ka taagneyd.
Maxkamadda ayaa oggolaatay inay sax tahay in haweenka Muslimiinta ah ay xaq u leeyihiin inay furaan nimankooda iyadoo la marayo shareecada Islaamka.
Tani waxay ka dhigan tahay in marka laga soo tago sharciga Hindiya, ay haatan haweenka Muslimiinta ah u bannaan yihiin afar arrimood oo ay shareecada u oggolaatay.
Waa muhiim in la ogaado jawaabaha afartan su’aalood si loo fahmo muhiimadda iyo saameynta uu go’aankan u leeyahay nolosha haweenka iyo ragga Muslimiinta ah.
Maxaa loo dhegeystay kiiska?
Dalka Hindiya, sida uu qabo ‘Sharciga Laalidda Guurka Muslimiinta 1939’, waxaa jira ikhtiyaar ah in la aado maxkamad qoys si ay haweeneyda isaga furto ninkeeda iyadoo adeegsaneysa sagaal kiis.
Kiisaskaas waxaa ku jira dhaqan xun oo uu ninku leeyahay, inuusan biil siin muddo labo sano ah, inuusan guri geysan muddo saddex sano, in la waayo muddo afar sano ah, inuu tabar la’aan noqdo, IWM.
Shajanna M., oo ka tirsan Isutagga Haweenka Qareennada Kerala, ayaa BBC-da u sheegtay, “Maxkamadda way ku dhibbanaayeen haweenka Muslimiinta ah, mararka qaar kiisasku waxay qaadanayaan toban sano, kharash ayaa ku baxaya, waqti ayaa sidoo kale ku baxaya caddeymo badan ayaana loo baahan yahay si loo xaqiijiyo dhaqanka ninka. ”
Shaista Rafat, oo xubin ka ah Guddiga Dhexe ee Talobixinta Jamaat-e-Islami Hind, oo ah urur Islaami ah, ayaa sidoo kale rumeysan in ikhtiyaarka koowaad ee haweenka Muslimiinta uu yahay in lagu furo qaab Islaami ah, intii ay mari lahaayeen hannaan sharci waqtigiisu dheer yahay oo jahwareer ah.
Waxaa Maxkamadaha qoysaska Kerala ka socday kiisas badan oo u dhaxeeya lammaane Muslimiin ah kuwaas oo aan wax go’aan ah laga gaarin.
Marka racfaan ka dhan ah uu gaaro Maxkamadda Sare ee Kerala, labo garsoore ayaa si wada jir ah u dhegeysanaya.
Waa maxay go’aanka maxkamadda?
Kaddib dhegeysiga, Maxkamadda Sare ee Kerala ayaa caddeysay in marka laga soo tago sharciga Hindiya, ay haweenka Muslimiinta ah sidoo kale raggooda iska furi karaan iyaga oo maraya Shaceerada Islaamka.
Mid ka mid ah ujeeddooyinka arrintan waa in lagu yareeyo cadaadiska kiisaska badan ee yaalla maxkamadda qoyska, ujeeddada kalena waa in la hubiyo in haweenka Muslimiinta ah ay xaq u leeyihiin inay nimankooda iska furaan.
Iyadoo soo xiganeysa go’aankii Maxkamadda ugu Sarreysa ay ku xukmisay in sharci darro ay tahay furriinka saddexda jeer ah, waxay maxkamaddu tiri, “Dad badan ayaa la sheegay inay sameeyaan wax “sharciga ka baxsan “iyagoo aan meesha ka saareynin habka aan Islaamiga ahayn sida furriinka saddexda jeer ah. ”
Go’aankan oo ay gaareen labo garsoore ayaa isla go’aakaas ka soo baxay isla maxkamadda meesha ka saaray sanadkii 1972, kaas oo lagu sheegay in habka keliya ee ay haweenka Hindiya u dalban karaan furriin uu yahay waddada saxda ah. Wuxuu garsooruhu Shareecada Islaamka ku sheegay inay tahay mid ‘Sharciga ka baxsan’.
Waa maxay arrimaha ay oggoshahay Shareecada
Haweenka Muslimiinta ah waxaa u furan afar ikhtiyaar oo ay raggooda isaga furi karaan iyaga oo maraya Shareecada.
Maxkamadda Sare ee Kerala ayaa go’aankeeda ku caddeysay dhammaan waddooyinkaas. Waxay sidoo kale sheegtay in haddii ay dhacdo ‘Khula’, oo ah in ninku diido furriinka, la isku dayo in wada xaajood laga gaaro arrimaha dhex yaalla lammaanaha.
Shaista Rafat ayaa soo dhoweeyay go’aankan wuxuuna ku sheegay inay tahay tallaabo sax ah oo loo qaaday xuquuqda haweenka.
Mar uu la hadlayay BBC, ayuu yiri, “Haweenka aadka ugu careysan ninkooda isla markaana aanan fureynin, haatan way nafisi karaan. Qaadiga ayaa sidoo kale dhegeysan doona haweeneyda waxayna awoodi doonaan inay caawiyaan ninka.”
Previous articleCiidamo uu wato iyo Gaadiid Dagaal uu la socday Jeneraal liibaan madaxweyne oo soo gaaray Muqdisho Sawiro
Next articleMadaxweynahii Hore Sheikh Shariif oo kulan la qaatay Taliyahii Ciidanka Xoogq
Sida ay u xaqiijiyeen warbaahinta DAYNIILE.COM saraakiisha booliska Gobolka Mudug Wariye Jamaal Faarax Aadan waxaa lagu dilay dhacdo gaadmo ah,waxaana toogtay labo nin oo...
Gaari laga soo Buuxiyay walxaha Qarxa oo lagu dhuftay albaabka Xerada...